PALAUNG NATIONAL SOCIETY - JAPAN: May 2015
လှေစီး ဒုက္ခသယ် များအတွက် ၀မ်းမြောက်ဖွယ်
တိုက်လေယာဉ်တစ်စီး မီးလောင် ပျက်ကျ
နာမည်ကျော်လှသော ‘၀’ မြို့တော်ဆီဝယ်
တရားစီရင်ရေးမဏ္ဏိုင် ကို စနစ်ဟောင်း အကျင့်ဟောင်းတွေ...
့ဒီရက်ပိုင်း ကချင်ဒေသ တိုက်ပွဲဆက်ဖြစ်....
ကိုးကန့်အရေးသုံးသပ်ချက် (VOA)စစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်အပေါ် ...
မန်စီတွင် တပ်မတော် နှင့် ကေအိုင်အေ တိုက်ပွဲ ပြင်းထ...
တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေး အဖွဲ့အစည်းမျာ...
တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများ၏ ပန်ခမ်းအစ...
ပန်ဆန်း ညီလာခံ စပြီ
ကိုးကန့် ဒေသ တိုက်ပွဲတွေမှာ ဗမာအစိုးရတပ် ဘက်က ဆင့်...
ဧပြီလ ၂၉- ၃၀ ရက် တအာင်းဒေသ တိုက်ပွဲသတင်း
စစ်ထောက်လှမ်းရေးအရာရှိ(ဟောင်း)ဗိုလ်မှူး အောင်လင်းထွဋ္ဋ် ကိုးကန့်တိုက်ပွဲသုံးသပ်ချက်
အင်အားနဲ့တိုက်ခိုက် စစ်ရေးနဲ့သာ ဖြေရှင်းမယ်ဆိုရင် ဒီတသက် ငြိမ်းချမ်းရေး အလှမ်းဝေးနေအုံးမှာပါ ....
နှစ် ၆၀ ကျော် ပြည်တွင်းစစ် သက်တမ်း ဆက်တိုးရုံပေါ့...
ပင်လယ်တွင်းမှာမြောပါနေတဲ့ လှေစီး ဒုက္ခသယ်များကို အာဖရိက ကနိုင်ငံငယ် တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဂမ်ဘီယာ ( Gambia ) နိုင်ငံက လက်ခံမည်ဖြစ်ကြောင်း တရားဝင် ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။
အခြေချနေထိုင်ခွင့်ကို လက်ခံမဲ့ ဂမ်ဘီယာ နိုင်ငံအကြောင်းကို လေ့လာကြည့် တဲ့အခါ…စင်္ကာပူ ထက် ၁၅ ဆလောက်ကျယ်ဝန်းပါတယ်။ လူဦးရေအားဖြင့် ၁.၈ သန်း ကျော်ပဲရှိပါတယ်။ ( စင်္ကာပူ လူဦးရေက..ငါးသန်းကျော်ရှိပါတယ် )။ အာဖရိက ရဲ့ အဆင်းရဲဆုံးနိုင်ငံတွေထဲမှာ မပါရှိယုံမက…မြန်မာထက်တောင် သာလွန် နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။
အစိုးရဟာ..စိုက်ပျိုးရေးကို အခြေခံသော လွတ်လပ်တဲ့ ဈေးကွက်စီးပွားရေး အရှိန်အဟုန်ကို မြှင့်တင်လိုတာကြောင့် အခြေချနေထိုင်မဲ့သူ များလိုအပ်တာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဂမ်ဘီယာ နိုင်ငံဟာ…လှေစီး ဒုက္ခသယ်များသာမက ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် - မြန်မာ အငြင်းပွားဖွယ်ရာ ဖြစ်နေတဲ့ လူဦးရေ - ရှစ်သိန်းကိုတောင် လက်ခံမယ်ဆို လက်ခံလို့ ရနိုင်တဲ့အနေထား ရှိနေပါတယ်။ အရေးအကြီးဆုံးအချက် ကတော့ ဂမ်ဘီယာ နိုင်ငံဟာ အစ္စလမ်ဘာသာ ကိုးကွယ်သူ ၉၀ % ရှိတဲ့အတွက် လှေစီး ဒုက္ခသယ်များအတွက် အထူးအခွင့်လမ်း တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် မြန်မာ အနေနဲ့ လှေစီး ဒုက္ခသယ်များ အရေးကို လျှစ်လျူ ရှုထားမယ် ဟိုပုတ် ဒီလွှဲလုပ်နေမယ်ဆို..ကမ္ဘာ့အလယ်မှာ သိက္ခာကျယုံမက..လူ့အခွင့်ရေးချိုး ဖောက်တယ်ဆိုတဲ့ အမဲစက် ကို လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိပါတယ်။ မြန်မာကို ဖိအားပေးမူ့ မျိုးစုံနဲ့ ရင်ဆိုင်ရနိုင်ပါတယ်။
အဲဒီ့အစား…ကြည်ကြည်ဖြူဖြူ လက်ခံနေတဲ့ ဂမ်ဘီယာ နိုင်ငံအတွက် အားတက်သရော ကြိုးပမ်း လုပ်ဆောင်ပေးခြင်းဖြင့်..လှေစီး ဒုက္ခသယ် များ အရေးကို ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့..အချက်အလက်တစ်ခုအဖြစ် အကြံပြုပါတယ်။
သတင်း အတည် ပြုချက် မရသေးပါ ဆက်လျက်စုံ စမ်းဆဲ ပါ
တရုတ် -မြန်မာ နပ်စပ် ကိုးကန့်ဒေသ. တရုတ်
ဘက်ခြမ်း ပြောင်းဖူးခင်း တွင် ယမာန်နေ့ က တိုက်လေယာဉ်တစ်စီး မီးလောင် ပျက်ကျ နေ သည့် မြင်ကွင်း။
အတည် မပြု နိုင်သေး သည့် သတင်းအရ မြန် မာ တိုက်လေယာဉ် များ တရုတ် နယ်ထဲ သို့ နယ်ကျော် ၀င်ရောက်ခြင်း ကြောင့် တရုတ် မြေပြင်တပ် မှ ပစ်ချ ခဲ့ ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း လည်း နယ်စပ် တရုတ် ဘက်က သတင်းများ ထွက်နေ ပါ သည်။
‘၀’ဒေသ၏ မြို့တော်ဖြစ်သော ပန်ဆန်းမြို့ကို အပေါ်စီးမှမြင်တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ−ငြိမ်းငြိမ်းပြည့်)
သမ္မတ၊ တပ်ချုပ်နှင့် လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌအပါအ၀င် ထိတ်ထိတ်ကြဲ လူကြီးမင်းများ ပေးအပ်ထားသော လက်ဆောင်ပစ္စည်းများ၊ နိုင်ငံတော်တံဆိပ်ခတ်နှိပ်ပြီး မြန်မာ-တရုတ် နှစ်ဘာသာဖြင့် ရေးထိုးထားသော ထိုအရာများကို မြင်လိုက်ရသည့်နေရာက နေပြည်တော်မှ မိုင်ထောင်ချီဝေးသော ဝေးလံခေါင်ဖျားတောင်တန်းလျှိုမြောင်များအလယ်ရှိ အိမ်ကြီးရခိုင်တစ်ခုထဲတွင် ဖြစ်သည်။
‘‘ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၏ ‘၀’အထူးဒေသ (၂) အဖွဲ့ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင် ဦးပေါက်ယိုချမ်အတွက် ချစ်ကြည်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလက်ဆောင်’’ဟု ရေးထားပြီး ဖဲကြိုးပြာဖြင့် ချည်နှောင်ထားသည့် ငွေဆွမ်းအုပ်။
လက်ဖက်ခင်းကိုစောင့်နေသော ၀,တပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး (ဓာတ်ပုံ - ငြိမ်းငြိမ်းပြည့်)
ဆွမ်းအုပ်နှင့်ကပ်လျက်တွင် သာယာလှပသော တောတောင်ရေမြေ နောက်ခံရှုခင်းနှင့် ငွေဒေါင်းဖြူနှစ်ကောင်ပုံပါသည့် ကျောက်စီပန်းချီကားချပ်ကြီးကမူ ‘‘ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်၏ ‘၀’အထူးဒေသ(၂)အဖွဲ့ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင် ဦးပေါက်ယိုချမ်အတွက် ချစ်ကြည်ရေး ငြိမ်းချမ်းရေးလက်ဆောင်’’ဟု ရေးသားထားသောစာကို တွေ့ရသည်။
ထို့အပြင် အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်အောင်မြင့်၏ မေတ္တာလက်ဆောင်၊ မြန်မာစစ်သံ (ကြည်း၊ ရေ၊ လေ) ဗိုလ်မှူးကြီးတင့်ဝေက ပေးထားသော ငြိမ်းချမ်းရေး ဓမ္မဒါနလက်ဆောင်၊ ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးဇော်မင်းစိုး တသခ၊ စရနနှင့် ဗိုလ်မှူးကျော်ထင်အောင် စရဖ(တသခ)တို့က ပေးထားသော အမှတ်တရလက်ဆောင်၊ တြိဂံဒေသတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်က ပေးထားသော အမှတ်တရလက်ဆောင်၊ တိုင်းမှူးဗိုလ်ချုပ်အောင်သန်းထွဋ်က ပေးထားသော အမှတ်တရလက်ဆောင်အပါအ၀င် များပြားလှသည့် လက်ဆောင်များကိုလည်း အိမ်အ၀င်နံရံတစ်ဖက်တွင် ထင်သာမြင်သာ ချိတ်ဆွဲခင်းကျင်းပြသထားသည်။
ယင်းအိမ်ကြီးသို့ မရောက်မီ ပေ ၁,၀၀၀ ခန့်အကွာတွင် ‘တားမြစ်နယ်မြေ’ဆိုသည့် အပြာရောင်ဆိုင်းဘုတ်တစ်ခုရှိပြီး လက်နက်ကိုင်စစ်သားများက အချိန်ပြည့်စောင့်ကြပ်နေကြသည်။ အိမ်ကြီးကို ‘ဦးပေါက်အိမ်တော်’ဟု အချို့က တိတ်တခိုးခေါ်ဝေါ်ကြ၏။ ရှမ်းပြည်နယ်ရှိ ဟိုပန်၊ မိုင်းမော၊ ပန်ဝိုင်၊ နားဖန်း၊ မက်မန်းနှင့် ပန်ဆန်း(ပန်းခမ်း)မြို့နယ် ခြောက်မြို့နယ်ကို ခရိုင်နှစ်ခုခွဲကာ ‘၀’ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်းအဖြစ် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွင် ပြဋ္ဌာန်းထားရာ တောင်ကုန်းမြင့်ပေါ် ခမ်းခမ်းနားနား တည်ဆောက်ထားသော ထိုအိမ်ကြီးသည် ‘၀’ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ တိုင်းအစိုးရဥက္ကဋ္ဌ ဦးပေါက်ယိုချမ်၏ အိမ်တော်တစ်ခုပင် ဖြစ်လေသည်။
ပြင်ပလူများ အထူးသဖြင့် သတင်းထောက်များ ၀င်ရန်မလွယ်ကူသလို ၀င်ပြီးနောက် လွဲချော်မှု တစ်စုံတစ်ရာရှိပါက ပြန်ထွက်ရန် မလွယ်ကူသည့် ဒေသအဖြစ် နာမည်သတင်းမွှေးသော ‘၀’ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း၏ မြို့တော်၊ ‘၀’ ပြည် သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီ/ တပ်မတော် (UWSP/UWSA) ဌာနချုပ် ပန်ဆန်း(ပန်းခမ်း)သို့ ၂၀၁၅ ဧပြီလကုန် မေလဆန်းတွင် လက်တစ်ဆုပ်စာ သတင်းထောက်အချို့ ပထမဆုံးအကြိမ် ၀င်ရောက်ခွင့်ရခဲ့သည်။ အကြောင်းရင်းက ‘၀’ ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွင် ဆယ်စုနှစ်များစွာအတွင်း ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ကျင်းပသည့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ ထိပ်သီးခေါင်းဆောင်အစည်းအဝေးကို စောင့်ကြည့်သတင်းယူရန် ဖြစ်လေသည်။
‘‘ခင်ဗျားတို့ ဒီမှာ လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပဲ။ ဒါပေမဲ့ စစ်တပ်အကြောင်း၊ စစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်တာ လုံးဝမမေးပါနဲ့။ အေး...မေးလည်း ဘယ်သူမှ ဖြေမှာမဟုတ်ဘူး’’ဟု ‘၀’အစိုးရ ပြင်ပဆက်ဆံရေးတာဝန်ခံ ဦးဆမ်ခွန်းက သတင်းထောက်များအား ခရီးရောက်မဆိုက်ပင် ပြောသည်။
ပေါက်ယိုချစ်အိမ်တော်မှ လက်ဆောင်ပစ္စည်းများပြသထားသော ဧည့်ခန်း (ဓာတ်ပုံ - ငြိမ်းငြိမ်းပြည့်)
UWSA ကို မြန်မာနိုင်ငံရှိ အကြီးဆုံးနှင့် အင်အားအတောင့်တင်းဆုံး တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အဖြစ် သတ်မှတ်ထားကြသည်။ မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်ကို လေ့လာစောင့်ကြည့်သော Myanmar Peace Monitor ၏ ခန့်မှန်းခြေစာရင်းအရ ‘၀’စစ်တပ်အင်အား ၂၀,၀၀၀ မှ ၂၅,၀၀၀ ကြားရှိသည်။ အခြားစစ်တပ်များကမူ အင်အားသုံးသောင်းခန့်ရှိသည်ဟု ခန့်မှန်းထားကြသည်။ ထို့ကြောင့်ပင် ၎င်း၏
အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် အလှမ်းဝေးသွားပြီးလား...
ကိုးကန့်တိုက်ပွဲ (May 12,2015)VOA & ဦးထွန်းမြတ်လင်း (MNDAA)
Posted by Naw Jadup on Tuesday, May 12, 2015
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း သိန္နီ၊ ကျောက်မဲနဲ့ အရှေ့မြောက်ပိုင်း လောက်ကိုင်၊ ကုန်းကြမ်းစတဲ့ ဒေသတွေမှာ အစိုးရတပ်နဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကြား တိုက်ပွဲတွေ ပြင်းထန် ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။
လောက်ကိုင်မြို့နယ် နန်ထိန်မိန်တောင်ကုန်းတလျှောက်မှာ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းကစ တိုက်ပွဲ ဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားရာမှာ ဒီကနေ့ မေလ ၁၂ ရက်နေ့မှာလည်း အစိုးရတပ်ဘက်က မိုးမလင်းခင်ကတည်းက လက်နက်ကြီးနဲ့ ပစ်သလို ရဟတ်ယာဉ်ပေါ်ကနေ ဗုံးကြဲခဲ့တယ်လို့ အမ်အန်ဒီအေအေ ကိုးကန့်တပ်ရဲ့ ပြောခွင့်ရ ဦးထွန်းမြတ်လင်းက ဒီဗွီဘီကို ပြောပါတယ်။
“အခု ၂ ရက် ၃ ရက်အတွင်း အပြင်းထန်ဆုံးလို့ ပြောရမယ်ထင်တယ်။ နန်ထိန်မိန်တ၀ိုက်မှာ ဖြစ်နေတာ။ မနေ့ကလည်း ပြင်းထန်တယ်။ ဝေဟင်ပေါ်ကနေ ဟတ်စကီးနဲ့ စက်သေနတ်နဲ့ ပစ်တယ်။ ဗုံးကြဲတယ်။ အလုံး ၁၀၀ ကျော်ကျပါတယ်။ အောက်မှာတော့ ကြည်းတပ် ထိုးတယ်။ တင့်ကားရော၊ သံချပ်ကာကားပါ ပစ်ကူတယ်။”
အစိုးရတပ်ဘက်က အင်အားကို မသိရပေမယ့် သူတို့ဘက်ကတော့ အင်အား ၅၀၀ ကျော်နဲ့ ပြန်ခုခံနေတယ်လို့ သူက ဆက်ပြောပါတယ်။ လက်တလော တိုက်ပွဲတွေကြောင့် နှစ်ဘက် ထိခိုက်ကျဆုံးမှု အရေအတွက်ကိုတော့ မသိရသေးပါဘူး။
ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း သိန္နီမြို့နယ်ဘက်မှာတော့ မေလ ၁၀ ရက်နေ့ညက အစိုးရတပ်နဲ့ တီအန်အယ်လ်အေ တအာင်းတပ်ကြား နားတီးရွာနဲ့ မြောက်ဇီရွာအနီးမှာ တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီး အစိုးရတပ်ဘက်က ၂၀ ကျဆုံး၊ ၁၇ ဦးထက်မနည်း ဒဏ်ရာရတယ်လို့ တအာန်း အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် တီအန်အယ်လ်အေက ထုတ်ပြန်ပါတယ်။
မေလ ၁၁ ရက်နေ့ကလည်း ကွမ်းလုံသွားလမ်းပေါ် တက်လာတဲ့ အစိုးရစစ်ယာဉ်တန်းကို တအာင်းတပ်ဘက်က ပခုံးထမ်းလောင်ချာနဲ့ ပစ်ခတ်ခဲ့ရာမှာ အစိုးရယာဉ်တန်းကား ၄ စီး ထိမှန်ပျက်စီးပြီး ထိခိုက်ကျဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ လည်းကြေညာထားပါတယ်။
ဖေဖော်ဝါရီလကနေ မေလ လယ်ထိ လောက်ကိုင်ဒေသ စွန်သျှန်၊ လောဝ်တုံကို၊ ချီမင်ချွန် စတဲ့ရွာတွေမှာ ကိုးကန့်အရပ်သား သက်ကြီးရွယ်အို ၂ ဦးအသတ်ခံရပြီး မြန်မာစစ်တပ်က ပစ်ခတ်တဲ့ လက်နက်ကြီးထိမှန်သေဆုံးသူ ၂ ဦးရှိခဲ့တယ်လို့ ပြည်ပအခြေစိုက် ရှမ်းလူ့အခွင့်အရေးမဏ္ဍိုင်အဖွဲ့က မေလ ၁၁ရက်နေ့က ထုတ်ပြန်ပါတယ်။
ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီ အစိုးရစစ်တပ်ဘက်က သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း မရှိသေးသလို သီးခြားအတည်ပြုချက်ရယူနိုင်ခြင်းလည်း မရှိသေးပါဘူး။
ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်မင်းကတော့ ပဋိပက္ခဖြစ်နေတဲ့ဒေသက တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ နိုင်ငံရေးဆွေနွေးပွဲလုပ်နိုင်ဖို့ဆိုရင် ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့က သူတို့ စခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲကို အရင်ရပ်ပေးဖို့ လိုတယ်လို့ မေလ ၁၀ ၇က် ရန်ကုန်မှာကျင်းပတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးဆုိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲမှာ ပြောပါတယ်။
စစ်အာဏာရှင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေ လူဝတ်လဲပြီး ဦးဆောင်နေတဲ့ လွှတ်တော်ကြီးထဲမှာ ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်း တောင်တန်း တွေပေါ်က ဘိန်းရာဇာတွေလို့ နာမည်ကြီးနေတဲ့ လွှတ်တော်အမတ် ၂ ဦး ပါဝင်နေတဲ့ အကြောင်း ဒေသခံ တိုင်းရင်းသား တွေနဲ့ ဒေသတွင်း ဘိန်းနဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါး ထုတ်လုပ် ရောင်းချမှုတွေကို စောင့်ကြည့်သူတွေက ထုတ်ဖော်ပြောဆိုကြပါတယ်။
&amp;lt;a href='http://ads.irrawaddy.org/openx/www/delivery/ck.php?n=a29eb727&amp;amp;amp;cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'&amp;gt;&amp;lt;img src='http://ads.irrawaddy.org/openx/www/delivery/avw.php?zoneid=86&amp;amp;amp;cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&amp;amp;amp;n=a29eb727' border='0' alt='' /&amp;gt;&amp;lt;/a&amp;gt;
သူတို့ နှစ်ဦးကတော့ ကွတ်ခိုင်မြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် အမတ် ဦးတီခွန်မြတ်နဲ့ ပြည်နယ်လွှတ်တော်အမတ် ပန်းဆေး ဦးကျော်မြင့် (ခေါ်) လီယောင်ကျန်း တို့ဖြစ်ကြပြီး သူတို့ဟာ အစိုးရ လက်အောက်ခံ ပြည်သူ့စစ် ခေါင်းဆောင်တွေလည်း ဖြစ်ကြတယ်၊ ရှမ်းပြည် မြောက်ပိုင်းမှာ ဘိန်းစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ် သူတွေလို့လည်း သူတို့ကို လူသိများကြပါတယ်။
ဦးတီခွန်မြတ်က ကွတ်ခိုင်မြို့နယ် အခြေစိုက် “အထူးပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့” ခေါင်းဆောင် တဦးဖြစ်ပြီး ဦးကျော်မြင့်ကတော့ နမ့်ခမ်း မြို့နယ်အခြေစိုက် “ပန်းဆေး ပြည်သူ့စစ် အဖွဲ့” ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ နှစ်ဦးစလုံးဟာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ (ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ) ကနေ ဝင်ရောက် အရွေးချယ် ခံခဲ့သူတွေလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့ ထိန်းချုပ်ခွင့် ရထားတဲ့ နယ်မြေအတွင်းက တောင်တန်းတွေပေါ်မှာ ကိုယ်တိုင် ဘိန်းစိုက်ပျိုး ထုတ်လုပ် ဖြန့်ဖြူးမှု၊ အခွန်အခ ကောက်ယူပြီး ဘိန်းစိုက်ပျိုးခွင့် ပြုမှု၊ ဘိန်းဖြူ၊ ဘိန်းမဲ အပါအဝင် တခြား မူးယစ်ဆေးဝါး တွေကို လက်သိပ်ထိုး ရောင်းချခွင့် ပြုမှု တွေမှာ အဓိက ပါဝင်ပတ်သက်သူတွေဖြစ်တဲ့
တရားစီရင်ရေးမဏ္ဏိုင် ကို စနစ်ဟောင်း အကျင့်ဟောင်းတွေနဲ့
နိင်ငံတော်အဆင့် တာဝန်ရှိသူများအားလုံး ကိုနေမျိုးဇင်က. တရားစီရင်ရေးမဏ္ဏိုင် ကို စနစ်ဟောင်း အကျင့်ဟောင်းတွေနဲ့ပျက်စီးရာပျက်စီးကြောင့်ဆက်မလုပ်ပါနဲ့ အနာဂတ်တိုင်းပြည်နစ်နာတယ်လိုပြော့
Posted by Aye Kyaw on Monday, May 11, 2015
ပြီးခဲ့တဲ့ မေ (ရ) ရက် နေ့ က နေ ဒီနေ့ ထိ ကေအိုင်အေ တပ်မဟာ(၃) တပ်ရင်း (၁၂ ) နယ်မြေ နမ့်လင်းပါ ၊ ကောင်ဂျာ ၊ မာဂါးယန် ဒေသ တစ်ဝိုက်မှာ ဒီနေ့ ထိ တိုက်ပွဲဆက်ဖြစ်ပါတယ် ။ ဗမာ အစိုးရတပ် ခမရ (၁၅) (၁၄၂ ) ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ တွေနဲ့ ဒီရက်ပိုင်း တိုက်ပွဲဆက်ဖြစ်နေတာဖြစ်ပြီး မေလ (၈)ရက်နေ့ မာဂါးယန်ကျေးရွာ အနီး ဖြစ်တဲ့ တိုက်ပွဲမှာ အစိုးရတပ်ဘက်က ထိခိုက်ကျဆုံးမှု အများဆုံး ဖြစ်တယ်လို့ သိရ တယ် ။ ထိခိုက်မှု များနေတဲ့အတွက် ...အစိုးရတပ်ဘက်က ခလရ (၈၆)တပ်ရင်း နဲ့တပ်ရင်း နာမည် မသိရသေးတဲ့ တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့ တွေကို အင်အားဖြည့်တင်းပြီး တိုက်ပွဲ အရှိန်မြှင့်နိုင်ဖို့ အတွက် ထပ်မံ စစ်ကြောင်းထိုးနေ တယ်လို့ သိရတယ် ။
အင်အားဖြည့်တင်းဖို့ တက်လာတဲ့ တပ်ရင်းစစ်ကြောင်း တွေ လမ်းတစ်လျှောက် ထပ်မံ တိုက်ခိုက် ခံနေရတဲ့အတွက် တိုက်ပွဲတွေ ဆက်ဖြစ်နေတယ်လို့ ဆိုပါတယ် ။ ဒီနေ့ ထိ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ တိုက်ပွဲမှာ မိမိ ကေအိုင်အေ ဘက်က မျိုးချစ်စစ်သည် (၃) ဦး ထိခိုက်ကျဆုံး ပါတယ် ။ အစိုးရတပ်ဘက်တော့ ထိခိုက်ကျဆုံးမှုများနေပြီး ခန့် မှန်းခြေ အရေအတွက်သိနိုင်ဖို့ ထပ်မံ စုံစမ်းနေပါတယ် ။
ကိုးကန့်အရေးသုံးသပ်ချက် (VOA)စစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်အပေါ် မီဒီယာ ရဲ့ခံစစ်
ကိုးကန့်အရေးသုံးသပ်ချက် (VOA)*************************စစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်အပေါ် မီဒီယာ ရဲ့ခံစစ်
Posted by Naw Jadup on Thursday, May 7, 2015
ကချင်ပြည်နယ် ဗန်းမော်ခရိုင် မန်စီမြို့နယ် နမ်လင်းပါ ကျေးရွာအနီး အစိုးရ စစ်တပ်က တိုက်လေယာဉ် နှစ်စီးဖြင့် ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး လက်ရှိတိုက်ပွဲများ ဆက်လက် ဖြစ်ပွားနေသည်ဟု KIA တပ်ရင်း ၁၂ တပ်ရင်းမှူး ဗိုလ်မှူး ဂျွန်းအောင်က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
“ဒီနေ့ နေ့လယ် ၁ နာရီ ၂ နာရီကြားမှာ တိုက်လေယာဉ် ၂ စီးနဲ့ဗုံးတွေ လာကြဲသွားတယ်။ နာရီဝက်လောက် လာကြဲသွားတယ်။ ဗုံးဘယ်နှစ်လုံးလဲ ဆိုတာ မရေတွက်နိုင်တော့ဘူး။ အခုလည်း ကျနော်တို့ဘက်က ပစ်ဖို့ ပြင်ဆင်နေပြီ”ဟု ဗိုလ်မှူး ဂျွန်းအောင်က ပြောသည်။
KIA တပ်မဟာ ၃ လက်အောက်ခံ တပ်ရင်း ၁၂ နယ်မြေအတွင်း မန်စီမြို့နယ် နမ့်လင်းပါ ကျေးရွာအနီး ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် (KIA) နှင့် အစိုးရ စစ်တပ်တို့ မေလ ၇ ရက် နံနက် ၅ နာရီချိန် မှစတင်၍ မြေပြင်တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားနေရာမှ မွန်းလွဲပိုင်း ၁ နာရီချိန်တွင် အစိုးရ တပ်မတော်က တိုက်လေယာဉ်နှစ် စီးဖြင့် လာရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
ကချင်ပြည်နယ် ဒုတိယ ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ရဲမှူးကြီး ချစ်ဦး "မန်စီရဲ့ အနောက်တောင်ဘက် ၃၁ မိုင်ဝေးတယ်။ အစိုးရဘက် တပ်ရင်း ၁၄၂ နဲ့ ဟိုဘက် တပ်ရင်း ၁၂ နဲ့ပါ။ ၁၁နာရီလောက်ကနေ ၁၁ နာရီ ၁၅ လောက်ထိ ဖြစ်ကြတယ်တဲ့။ တိုက်ပွဲက ပြင်းထန်လား ဆိုတော့ ၁၅မိနစ်လောက်ဆိုတော့ ...။ ဒီဘက် က တပ်ရင်းမှူး စစ်ကြောင်းလို့ ပြောတယ်။ အသေအပျောက်တော့ မရှိဘူး ပြောတယ်။ စိစစ်နေတုန်းပဲ"ဟု မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
လက်ရှိ သတင်းရေးသားချိန် ညနေ ၅ နာရီခွဲချိန်ထိ တိုက်ပွဲ ဆက်လက်၍ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဖြစ်ပွားနေသည်ဟု ဗိုလ်မှူး ဂျွန်းအောင်က ပြောသည်။ မေလ ၆ ရက်က KIA တပ်ရင်း ၁၂ ရှိရာသို့ အစိုးရ တပ်မတော် တပ်ရင်း ၃ ရင်းက ဝင်ရောက်လာသဖြင့် တိုက်ပွဲ စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ မေ ၇ ရက်တွင်လည်း တပ်ရင်း ၂ ရင်းခန့် ထပ်မံ အားဖြည့်မှုများ ရှိနေသဖြင့် တိုက်ပွဲ ဆက်လက် ပြင်းထန်မည့် အခြေအနေ ဖြစ်နေသည်ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
သတင်းရင်းမြစ် - ချင်းမိုင်(မဇ္ဈိမ)
သိန်းစိန်အစိုးရ လက်လွတ်ခံလို့ မဖြစ်တဲ့ အခွင့်အရေးတစ်ခု
အာဏာရှင်က အာဏာမဲ့သူများကို အာဏာရူးလို့ ခေါ်တတ်ကြပါတယ်။ ပြည်ထောင်စုမလိုလားသူများက ပြည...်ထောင်စုဝါဒီများကို ခွဲထွက်သူများလို့ အမည်သညာ တပ်လိုကြပါတယ်။ ဒီလိုမလိမ့်တပတ်လုပ်ဖို့ အများစုက ပညာမတတ်မှ ဖြစ်မယ်။ ဒါကြောင့် အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေကို ပြင်ဆင်ဖို့ ဆန္ဒပြတဲ့ ကျောင်းသားတွေဟာ အချုပ်ခန်းထဲရောက်ကုန်ကြတယ်။ ဇက်ကြိုးတပ်တဲ့ပညာရေးကို မပြင်ချင်တာဟာ အာဏာရှင်တို့အတွက် မှန်ကန်ပေမဲ့ ပြည်သူတို့အတွက်တော့ ကျွန်သက်တမ်းရှည်စေတာမို့ မဟာအမှားတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
(၂) ထိုးစစ်များနဲ့ အပစ်ရပ်စာချုပ်
ပန်ဆန်းညီလာခံမှာ အစိုးရက ထိုးစစ်မရပ်ဘဲ တိုင်းရင်းသားတွေက အပစ်ရပ်စာချုပ်ကို လက်မှတ်ထိုးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ အားလုံးသဘောတူကြပါတယ်။ ဒါဟာ ပြောသင့်ပြောထိုက်တဲ့စကားပါ။ အစိုးရဟာ အပစ်ရပ်ဆွေးနွေးပွဲကို နိုင်ငံရေးအရလည်း အမြတ်ထုတ်နေခဲ့ကြပါတယ်။ စစ်ရေးအရလည်း နယ်မြေအသာစီးရအောင် အမြတ်ထုတ်နေခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါကို ရခိုင်၊ တအာင်းနဲ့ ကိုးကန့်တို့က ထောက်ပြပါတယ်။ စေတနာမမှန်တဲ့ အစိုးရနဲ့ ဆွေးနွေးနေတဲ့ NCCT ကနေ ထွက်ဖို့တောင် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အစိုးရအနေနဲ့ ဒီကိစ္စကို ရိုးရိုးသားသား ကိုင်တွယ်ဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။ ကရင်တပ်မဟာ(၂)ကို ဗုံးသွားကြဲတာမျိုးတော့ ကလေးကလားဆန်လွန်းလှပါတယ်။
(၃) ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ရေးနဲ့ အပစ်ရပ်စာချုပ်
ရခိုင်ကို အစိုးရက မချစ်ဘူးဆိုတာ AA နဲ့ မြန်မာ့တပ်မတော်တို့ထိပ်တိုက်တွေ့မှုမှာ ပေါ်လွင်စေပါတယ်။ သူရရွှေမန်းတို့ရဲ့ ရခိုင်ရောက်စကား၊ သိန်းစိန်တို့ရဲ့ ရခိုင်ပျားရည်ဆမ်းစကား၊ ခင်ရီတို့ရဲ့ မတည်မြဲတဲ့ ကတိစကားတွေဟာ AA က ရခိုင်မြေကို နင်းတာနဲ့ အရည်ပျော်ကုန်ကြပါတယ်။ AA တွေကို ဘင်္ဂလီတွေလောက်တောင် သဘောမထားနိုင်တဲ့ သိန်းစိန်အစိုးရကို ရခိုင်အမျိုးသားတွေက သိပ်ပြီး ယုံကြည်နေအုံးမယ်ဆိုခဲ့ရင် အမှားကြီး မှားပါလိမ့်မယ်။ ပန်ဆန်းညီလာခံမှာ ရခိုင်ဗိုလ်ချုပ်က ရုပ်ဖြောင့်သလို နှုတ်လည်း ဖြောင့်ပါတယ်။ သူက ဖွဲ့စည်းပုံကို မပြင်ရင် အပစ်ရပ်စာချုပ်ဟာ မစစ်မှန်နိုင်ဘူးလို့ ဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တို့က ၂၀၁၅ ခုနှစ်မတိုင်မီ ဖွဲ့စည်းပုံကို လိုအပ်သလို ပြင်ဆင်ပေးမှ အပစ်ရပ်စာချုပ်ကို လက်မှတ်ထိုးမှာဖြစ်ကြောင်း ဆုံးဖြတ်ကြပါတယ်။ ဒါဟာ ဘာကို ပြနေသလဲဆိုခဲ့ရင် NLD လှုပ်ရှားနေတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ရေးကို ထောက်ခံကြောင်း အတိအလင်း ကျေညာလိုက်ခြင်းပဲ ဖြစ်တယ်။ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာလည်း နောက်ရခိုင်ခေါင်းဆောင်တစ်ဦး ဖြစ်တဲ့ ဒေါက်တာအေးမောင်ကလည်း ဒီအရေးကို တစိုက်မတ်မတ် တောင်းဆိုနေခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။
(၃) ပြည်နယ်တွေ တိုးချဲ့ဖို့ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်ပါသလား
မြန်မာနိုင်ငံမှာ စစ်မှန်တဲ့ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုစနစ်ကို ထူထောင်နိုင်ခဲ့ရင် ပြည်နယ်သစ်တွေ ပေါ်လာမှာ မုချပါပဲ။ လက်ရှိပြည်နယ်နယ်နမိတ်တွေလည်း ပြင်ဆင်စရာရှိနေမှာပါ။ အလားတူ ဗမာပြည်နယ်တစ်ခုကို မီးဖွားသန့်စင်ပေးဖို့လည်း လိုပါလိမ့်မယ်။ ဒီအချက်ကို အခုထိ ဗမာတွေက သဘောမကျကြပေမဲ့ ဖြစ်သင့်တာက ဒီအတိုင်းပါပဲ။ ပန်ဆန်းထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမှာ ဝတို့က ပြည်နယ်တောင်းဆိုကြရာ (၁) နဂိုကတည်းက Federated Shan State မှာ မပါဖူးတာရယ်၊ (၂) အရင်က စစ်အစိုးရလက်ထက်တုန်းက စစ်အစိုးရထိပ်သီးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ ပုလဲနံသင့် နေထိုင်ခဲ့တာရယ်၊ (၃) တရုတ်တို့ရဲ့ ကျောထောက်နောက်ခံမှု ရှိနေတာရယ်တို့ကြောင့် ဝ ပြည်နယ်ဖော်ထုတ်ရေးကို စာနာမှု ပေးခဲ့ကြပါတယ်။ အလားတူ ပအိုဝ်းနဲ့ တအာင်းတို့ကလည်း ဝတို့လို အိပ်မက်ရှိကြသူများ ဖြစ်ပါတယ်။ Greater Shan State ကို ထိန်းထားလိုတဲ့ RCSS ဟာ UNFC ကနေ ဝေးဝေးနေတာထက် သဘောထားကြီးနဲ့နဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြပါမှ အခြားတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ ထောက်ခံမှုကို ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ ပန်ဆန်းထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမှာ ဘယ်တိုင်းရင်းသားကမှ ပြည်ထောင်စုကနေ ခွဲထွက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ ထပ်မံကတိပြုလိုက်ကြတော့ ပြည်ထောင်စုသစ္စာပန်းတစ်ပွင့်လို လှပလို့ နေပါတော့တယ်။
(၄) လောလောဆယ်ဆောင်ရွက်သင့်တဲ့ အချက်များ
(က) ဖမ်းဆီးထားတဲ့ ကျောင်းသားတွေကို ချက်ချင်းလွှတ်ပါ။ လွတ်လပ်တဲ့ပညာရေးစနစ်ကို ကျင့်သုံးပါ။ လွတ်လပ်တဲ့ ပညာရေးစနစ်ဟာ ဒီမိုကရေစီစနစ်ရဲ့ အသက်သွေးကြော ဖြစ်လို့ပါပဲ။
(ခ) အစိုးရအနေနဲ့ အပစ်ရပ်ကို အကြောင်းပြပြီး နိုင်ငံရေးနဲ့ စစ်ရေးအမြတ်ထုတ်နေမှုကို ချက်ချင်းရပ်ပါ။ ရိုးရိုးသားသားနဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံကို ပြင်ပါ။ ထိုးစစ်ကို ရပ်ပြီး ဖွဲ့စည်းပုံကို စောစောစီးစီး ပြင်နိုင်ခဲ့ရင် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ကံကြမ္မာကလည်း အကောင်းဘက်ကို ဦးတည်သွားပါလိမ့်မယ်။
သိန်းစိန်အစိုးရအနေနဲ့ တက်လာတုန်းက ကတိပြုခဲ့သလို သန့်ရှင်းတဲ့အစိုးရ၊ ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရတစ်ရပ်ကို မထူထောင်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ရေးတစ်ခုကိုတော့ ဆောင်ရွက်ခွင့် ရရှိနိုင်ပါသေးတယ်။ ဒီအခွင့်အရေးကိုလည်း လက်လွတ်လိုက်ရမယ်ဆိုရင် သိန်းစိန်အစိုးရဟာ (၅)နှစ်လုံးလုံးမှာ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို အကာအကွယ်ပေးရုံကလွဲပြီး တိုင်းပြည်အတွက် ဘာမှ မလုပ်ခဲ့ဘူးလို့ သတ်မှတ်ရပါလိမ့်မယ်။
တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေး အဖွဲ့အစည်းများ၏ ထိပ်သီးခေါင်းဆောင်များ မျက်နှာစုံညီ အစည်းအဝေး ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်
မေ - ၁ - ၂၀၁၅
ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် (KNLA) တပ်မဟာ ၂ ဌာနချုပ်တည်ရှိရာအနီးရှိ ယော်လို တွင် မြန်မာ့တပ်မတော်လေက ဗုံးကြဲချမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး (KNU) က ကန့်ကွက်ပြောဆိုလိုက်သည်။
အဆိုပါဗုံးကြဲချမှုကို ယနေ့နှင့်ပြီးခဲ့သည့် ဗုဒဟူးနေ့က ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ယခုလ ၇ ရက်နေ့ထိ ဆက်လက်ပြုလုပ်သွားရန်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိထားသည်ဟု (KNU) တွဲဘက်အတွင်းရေးမှူး(၁) ပဒိုစောသောသီဘွဲကပြောသည်။
၎င်းက လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်း အနေအထားများအရ ဗုံးကြဲချမှုများသည့် မလုပ်သင့်မဖြစ်သည့်သည့် အနေအထားများဖြစ်သည်ဟုလည်း ပဒိုစောသောသီဘွဲက ဖြည့်စွက်ပြောဆိုသည်။
မြန်မာစစ်တပ်ဘက်ကမူ အဆိုပါဗုံကြဲချမှုသည် တပ်မတော်လေမှစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုသာဖြစ်သည်ဟု ဒေသခံရွာသားများကို ပြောဆိုသည်။
ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် (KNLA) တပ်မဟာ ၂ ဌာနချုပ်သည် တောင်ငူခရိူင်အတွင်း တည်ရှိသည်။]
တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများ၏ ပန်ခမ်းအစည်းအဝေး အဖွင့်နေ့ မနက်ပိုင်းမြင်ကွင်း
Posted by Ta'ang Nationality on Friday, May 1, 2015
ယနေ့ မေလ ၁ ရက်တွင် စတင်ခဲ့သော ၀ ပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေး တပ်မတော် (UWSA) ဌာနချုပ် ပန်ဆန်းမြို့ တိုင်းရင်းသားထိပ်သီးခေါင်းဆောင်များ ညီလာခံတွင် တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားလျက်ရှိသော ကိုးကန့်ဒေသ၌ ငြိမ်းချမ်းရေးပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်ရေး ပါဝင်ဆွေးနွေးမည်ဖြစ်သည်။
ညီလာခံတက်ရောက်လာသူများထဲတွင် ကိုးကန့်အဖွဲ့ (MNDAA ) မှ စစ်ဦးစီးချုပ် ဖုန်လားရှင် နှင့် ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ် ရန်ဝေကျုံးနှင့် ကိုးကန့်အဖွဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးထွန်းမြတ်လင်းတို့အပါအ၀င် ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် တပ်မတော်နှင့် စစ်ရေးအခြေအနေတင်းမာနေဆဲ ဖြစ်သည့် ရက္ခိုင့်တပ်မတော် (AA) မှ စစ်ဦးစီးချုပ် ထွန်းမြတ်နိုင် ၊ ဒုတိယ စစ်ဦးစီးချုပ် ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင် တို့လည်း ပါဝင်သည်။
အခြားတက်ရောက်လာသူများမှာ ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် (KIA) မှ တပ်ချုပ်ကြီး ဗိုလ်ချုပ် ဇောင်းဟရား ၊ ဒုတိယ တပ်ချုပ် ဗိုလ်ချုပ် အင်ဘန်လ ၊ ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး (KNU) မှ ဒုဥက္ကဌ ပဒိုနော်စီဖိုးရာစိန် ၊ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ပဒိုစောကွယ်ထူးဝင်း၊ ရှမ်းပြည်တိုးတတ် ရေးပါတီ ( SSPP/SSA )မှ ဗိုလ်ချုပ်ဆေထင် ၊ ရှမ်းပြည်ပြန်လည် ထူထောင်ရေး ကောင်စီ (RCSS/ SSA) မှ ဒုဥက္ကဌ ဦးစမ်းရီ ၊ မိုင်းလားအဖွဲ့ (NDAA) မှ ဥက္ကဌ ဦးဆန်းပယ် ၊ မွန်ပြည်သစ်ပါတီ ( NMSP) မှ စစ်ဦးစီး ချုပ်- ဥက္ကဌ နိုင်ထွန်းမွန် ၊ဒု ဥက္ကဌ နိုင်ဟံသာ ၊ ကရင်နီ အမျိုးသား တိုးတတ် ရေးပါတီ (KNPP) မှ ဒုဥက္ကဌ ခူဦးရယ် နှင့် ဒုစစ်ဦးစီးချုပ် ခေါင်မြတ် ၊ ပအိုဝ့်အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ (PNLO) မှ ဥက္ကဌ ခွန်မြင့်ထွန်း၊ ဒုဥက္ကဌ- စစ်ဦးစီးချုပ် ခွန်သူရိန်၊ တအောင်း-ပလောင် လွတ်မြောက်ရေး အဖွဲ့ (PSLF/ TNLA) မှ ဒုဥက္ကဌ တားဂျုတ်ဂျာ တို့ ဖြစ်ကြသည်။
ကိုးကန့် ဒေသ တိုက်ပွဲတွေမှာ ဗမာအစိုးရတပ် ဘက်က ဆင့်ကဲ ဆင့်ကဲ ပေါက်ကွဲစေတဲ့ ကလပ်စတာဗုံးတွေကို လဲ အသုံးပြု ခဲ့တယ်ဆိုတာ ဒီရုပ်သံကို ကြည့်ရင် သိနိုင်ပါတယ် ။
Posted by Lung Jung on Friday, April 24, 2015
မေလ ၁ ရက် ၂၀၁၅ ခု
ဧပြီလ ၂၉ ရက် နံနက်ပိုင်း ၀၉း၀၀ မှ ၁၂း၀၀ အချိန်တွင် တအာင်းတပ်မတော် အမှတ်(၅)ဗျူဟာ ကွပ်ကဲမှု အောက်ရှိ TNLA တပ်ရင်း (၃၃၅)သည် တအာင်းဒေသ ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်ရှိ နမ့်ခိုင်တံတား အနီးတွင် နမ့်ဖတ်ကာ တိုက်နယ်အခြေစိုက် မြန်မာ့တပ်မတော်တပ်ရင်းတို့နှင့် ရင်ဆိုင် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး မြန်မာ့တပ်မတော်မှ အနည်း ဆုံး (၅)ဦးခန့် ဒဏ်ရာရှိကြောင်းသိရှိရသည်။
ဧပြီလ ၂၉ ရက် နေ့လည် ၁၁း၀၀ မှ ၁၂း၀၀ အချိန်တွင် တအာင်းတပ်မတော် တပ်မဟာ (၁)ကွပ်ကဲမှု အောက်ရှိ TNLA တပ်ရင်း (၅၇၁)သည် ကွတ်ခိုင်နှင့် မူဆယ်အကြားရှိ မြန်မာ့တပ်မတော် စစ်ကြောင်း တို့နှင့် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ မြန်မာ့တပ်ဖွဲ့ဘက်မှ ကျဆုံးမှု မသိရသေးပါ၊ တအာင်းတပ်မတော်မှ ထိခိုက်မရှိဟု သိရသည်။
ဧပြီလ ၃၀ ရက် နံက်ပိုင်း ၁၀း၀၀ မှ ၁၂း၀၀ နာရီအချိန်တွင် တအာင်းတပ်မတော် အမှတ် (၅)ဗျူဟာ ကွပ်ကဲမှုအောက်ရှိ TNLA တပ်ရင်း (၃၃၅) သည် ကွတ်ခိုင်မြို့အ၀င် အေရှဝေါဂိတ်အနီးရှိ မြန်မာ့ တပ်မတော်တို့နှင့် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီး မြန်မာ့တပ်မတော်မှ အရာရှိတစ်ဦးအပါအ၀င် အခြားအဆင့်များလည်း ထိခိုက်ကျဆုံးမှုရှိကြောင်းသိရသည်။
ဧပြီလ ၃၀ ရက် နေ့လည် ၁၂း၀၀ မှ ၁၃း၃၀ နာရီအချိန်တွင် တအာင်းတပ်မတော် အမှတ် (၅)ဗျူဟာ ကွပ်ကဲမှုအောက်ရှိ TNLA တပ်ရင်း (၂၂၃)သည် မြန်မာ့တပ်မတော်စစ်ကြောင်း တို့နှင့် ကွတ်ခိုင်မြို့ နယ်တွင် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး မြန်မာ့တပ်မတော်မှ (၅)ဦး ကျဆုံးပြီး အနည်းဆုံး (၆)ဦး ဒဏ်ရာပြင်း ထန်စွာရရှိသည်။
ဧပြီလအတွင်း တအာင်းတပ်မတော်မှ တိုက်ပွဲလျော့ချမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သော်လည်း လွန်ခဲ့သည့် ၂၇ ရက်နေ့တွင် မြန်မာ့တပ်မတော် TNLA စခန်းအား လာရောက်တိုက်ခိုက်ပြီးနောက် ယခုကဲသို့ တိုက်ပွဲများ ပြန်လည် ဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားလာခြင်းဖြစ်သည်။